देशैभर अहिले हावाहुरीसहित बर्षा, सर्तकता अपनाउन आग्रह ! « Nepal Bahas
देशैभर अहिले हावाहुरीसहित बर्षा, सर्तकता अपनाउन आग्रह !
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७६, शुक्रबार ११:३३
काठमाडौं । देशभर आज हावाहुरी र मेघ गर्जनसहितको वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज भारतको ओडिसा तटिय क्षेत्रमा भित्रिने फानीको प्रभाव नेपालमा सोझै नभित्रिए पनि मौसमी उतारचढाव भने रहने बताउँदै महाशाखाले बुलेटिन जारी गरेको छ ।
अहिले काठमाडौं आसपासका क्षेत्रमा कहि कतै छिटफुट बर्षा लगायत आकाश मडारिएको छ । मौसमविद्का अनुसार जुन सुकै बेला पनि मेघ गर्जनसहित हावाहुरी आउन सक्ने अनुमान गरिएकोले सर्तकता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
भारतको पूर्वीय तटवर्ती क्षेत्रबाट सामुद्रिक आँधी करिव २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा आउन लागेको अनुमान मौसमविद्ले गरेका छन् । ‘फानी’ नामक यस सामुद्रिक आँधीका कारण शुक्रबार अपराह्नमा हिन्दुको तीर्थस्थल जगन्नाथपुरी नजिकै भूस्खलन हुने पनि अनुमान समेत गरिएको छ ।
हाल बंगालको खाडीबाट उक्त समुद्री आँधी झण्डै २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा भारतको उडिसा राज्यतिर बढिरहेको छ । फानीले शुक्रवार जमिनमा प्रहार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यो उडिसाको तट हुँदै बंगलादेशतर्फ लाग्ने बताइएको छ । उक्त समुद्री आँधी नेपालनजिकै पूर्वोत्तर भारतबाट बंगलादेशतिर जाँदा त्यसको केही प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने संम्भावना रहेको छ ।
करिब १ हजार विद्यालय र सरकारी भवनमा १० लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई शरण दिइएको छ । छिमेकमा पर्ने राज्य आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई पनि आँधीले प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कतामा राखिएको छ ।
भारतको पूर्वी र दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा अप्रिलबाट डिसेम्बरसम्म प्रायः आँधीले सताउने गरेको हुन्छ । सन् २०१७ मा तमिलनाडु र केरला राज्यमा आएको सामुद्रिक आँधी ओक्खीले करिब २ सय ५० व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै ६ सय व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए ।
चक्रवात ‘फानी’को प्रभावले आज देशैभर हावाहुरी र मेघ गर्जनसहितको वर्षा !